ဒူဒူကြီး: Tonnage Measurement & Weight Measurement
Tonnage Measurement & Weight Measurement
သဘေ်ာတွေရဲ့ အရွယ်အစားကိုဖော်ပြတဲ့အခါ၊ "tonnage measurements" နဲ့ "weight measurements" ဆိုတဲ့ အလေးချိန်အတိုင်းအတာ အသုံးအနှုံးတွေနဲ့၊ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြကြပါတယ်။ tonnage measurements အသုံးအနှုံးမှာ 'GRT' လို့ခေါါတဲ့ gross registered tonnage နဲ့ 'NRT' လို့ခေါါတဲ့ net registered tonnage တို့ပါဝင်ပြီး၊ 'International Tonnage Measurement Convention 1969' ဥပဒေအရပြဌာန်းခဲ့တဲ့ GRT နဲ့ NRT အသုံးအနှူံးတွေကို၊ (၁၉၉၂) ခုနှစ်မှာ 'GT' ဆိုတဲ့ gross tonnage နဲ့ NT ဆိုတဲ့ net tonnage အသုံးအနှူံးတွေဖြင့်၊ အစားထိုးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ GRT - gross registered tonnage, NRT - net registered tonnage, GT - gross tonnage နဲ့ NT - net tonnage အစရှိတဲ့၊ tonnage measurement အသုံးအနှူံးတွေကို သဘေ်ာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အခွန်အခပေးဆောင်ခြင်းအစရှိတဲ့၊ ကိစ္စတွေအတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။
'GRT' ဆိုတဲ့ gross register tonnage ဆိုတာကတော့ သဘေ်ာတစီးလုံးရဲ့ ထုထည် volume ကို တိုင်းတာပြီး၊ အလေးချိန် weight ဖွဲ့ကာ သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထုထည် volume အားဖြင့် (၁၀၀) ကုဗပေ သို့မဟုတ် (၂. ၈၃) ကုဗမီတာဟာ၊ သတ်မှတ် မှတ်ပုံတင်အလေးချိန် registered tonnage (၁) တန် နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ (၁၀၀) ကုဗပေ သို့မဟုတ် (၂. ၈၃) ကုဗမီတာထုထည် volume ပမာဏရှိတဲ့ ကန်ထဲကို၊ ရေ fresh water အပြည့် ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ရေ ရဲ့ သိပ်သည်းဆ specific gravity ကို (၁) အဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့အတွက်၊ အလေးချိန်အားဖြင့် (၂, ၈၀၀) ကီလိုဂရမ် သို့မဟုတ် (၂. ၈) မက်ထရစ်တန်နဲ့ ညီမျှတယ်လို့ ယူဆပြီး၊ သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
'NRT' ဆိုတဲ့ net registered tonnage ဆိုတာကတော့၊ cargo hold နဲ့ cargo tank တို့လို၊ ကုန် cargo ထည့်သွင်းသယ်ဆောင်မယ့် နေရာတွေရဲ့ ထုထည် volume ကိုတိုင်းတာပြီး၊ ရေ ရဲ့ သိပ်သည်းဆဖြင့်၊ အလေးချိန်ဖွဲ့ကာ၊ သတ်မှတ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ engine room, bridge သို့မဟုတ် wheel house နဲ့ သဘေ်ာသားများနေထိုင်ရာ crew accommodation အစရှိတဲ့ နေရာတွေကို၊ ထည့်သွင်း တိုင်းတာခြင်းမပြုပဲ၊ ကုန်ထည့်သွင်း သယ်ဆောင်မယ့် နေရာတွေကိုသာ၊ သတ်မှတ်တိုင်းတာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သဘေ်ာ အမျိုးအစားအလိုက်၊ ကုန်သေတ္တာတင် container vessel သဘေ်ာ၊ ခရီးသယ်တင် passenger vessel သဘေ်ာ အစရှိတဲ့ သဘေ်ာ အမျိုးအစားအလိုက်၊ NRT တွက်ချက်ယူပုံ ကွဲပြားမှုလည်း ရှိပါတယ်။ အလားတူ သဘေ်ာမှတ်ပုံတင် registered ပြုလုပ်ထားရာ ဆိပ်ကမ်း port သို့မဟုတ် တိုင်းပြည် country နဲ့ သဘေ်ာသွားလာ ဖြတ်သန်းခုတ်မောင်းရာ သို့မဟုတ် ဆိုက်ကပ်ရာဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် တိုင်းပြည်အပေါါမူတည်လို့ ကွဲပြားမှူရှိပါသေးတယ်။
'GT' ဆိုတဲ့ gross tonnage ကိုတွက်ယူရာမှာ၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်ပုံ design ပုံသဏ္ဍန်ပေါါမူတည်ပြီး၊ GRT ဆိုတဲ့ gross register tonnage တွက်ယူပုံနဲ့ ကွာခြားပါတယ်။ GT ကို keel လို့ခေါါတဲ့ သဘေ်ာဧရာ ဝမ်းဗိုက်အောက်ခြေမှ hull framing တွေကစကာ၊ ခေါင်းတိုင် funnel အထိအလုံပိတ် enclosed space အဖြစ်၊ ယူဆကာ၊ ကုဗမီတာဖြင့် ထုထည် volume ကို တိုင်းတာတွက်ချက်ပါတယ်။ ကုဗပေဖြင့် တိုင်းတာ တွက်ချက်တဲ့ GRT နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ၊ (၀. ၅၉၁၉) GT ဟာ (၁) GRT နဲ့ညီမျှပြီး ထုထည်အားဖြင့် (၂. ၈၃၁၆) ကုဗမီတာ ရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပနားမားတူးမြောင်းကို ဖြတ်သန်းခုတ်မောင်းတဲ့အခါ 'PU/ UMS - Panama Canal Universal Measurement System' ဆိုတဲ့၊ သဘေ်ာရဲ့ စုစုပေါင်းထုထည် total volume အပေါါမှာ အခြေခံကာ တွက်ယူဖြစ်ပြီး၊ (၁) PU/ UMS Net ယူနစ်ဟာ (၁၀၀) ကုဗပေနဲ့ ညီမျှတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စူးအက်တူးမြောင်းကို ဖြတ်သန်းခုတ်မောင်းတဲ့အခါမှာတော့ (၁၈၇၃) ခုနစ် ကတည်းက၊ ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ 'Moorsom System' တွက်နည်းမှ၊ ဆင်းသက်လာပြီး၊ တူးမြောင်းအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Suez Canal Authority ကအကြိမ်ကြိမ် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ 'Suez Canal Net Tonnage' တွက်နည်းကို၊ အသုံးပြုပါတယ်။
Fig. Ship's side view
သဘေ်ာရဲ့ အလျှား length ကို 'LOA' ဆိုတဲ့ length over all, 'LBP' ဆိုတဲ့ length between perpendiculars နဲ့ 'LWL' ဆိုတဲ့ length on load waterline ဆိုပြီး၊ နည်းလမ်း (၃) ခုဖြင့် တိုင်းတာဖော်ပြပါတယ်။ 'LOA' ဆိုတဲ့ length over all ဟာ၊ သဘေ်ာဦး forward bow မှ သဘေ်ာပဲ့ပိုင်း aft stern အထိ တဖြောင့်တည်း၊ တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ 'LBP' ဆိုတဲ့ length between perpendiculars ဆိုတာကတော့ သဘေ်ာဦးနဲ့ သဘေ်ာပဲ့ပိုင်းမှ၊ အကွေးအဝိုက် ဧရိယာတွေကို၊ ချန်လှပ်ကာ အကျယ် width အနေနဲ့ တညီတည်းရှိနေမယ့်၊ ဦးကနေ ပဲ့ပိုင်း အထိ တောက်လျှောက်တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ 'LWL' ဆိုတဲ့ length on load waterline ဟာလည်း၊ သဘေ်ာရဲ့ load line လို့ခေါါတဲ့၊ ကုန်အပြည့် တင်ထားစဉ်၊ ရေပေါါပေါါနေမယ့် သဘေ်ာရဲ့အလျှားကို၊ တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Ship's front view
သဘေ်ာအမျိုးအစားနဲ့ သဘေ်ာတည်ဆောက်ပုံ design ပုံသဏ္ဍန်ကွဲပြားမှုတွေကြောင့်၊ သဘေ်ာရဲ့ အလျှားကို မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါ၊ တိကျတဲ့ အလျှားအတိုင်းအတာတခုဖြင့်၊ သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်လာပြီး 'registered length' လို့ခေါါပါတယ်။ rudder shaft သို့မဟုတ် rudder head ရဲ့ ဗဟိုမှ၊ အတွင်းဖက် အကျဆုံး သဘေ်ာဦးသံပြား bow plate နဲ့ forecastle upper deck တို့ရဲ့ဆုံမှတ် crossing point အထိ တိုင်းတာပြီး registered length အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ်အကျယ် width ကိုတော့ ဗျက် breadth လို့ခေါါဝေါါသုံးနှူံးပါတယ်။သဘေ်ာရဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ်အကျယ် width ကိုတော့ ဗျက် breadth လို့ခေါါဝေါါသုံးနှူံးပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ depth အနက်မှာ ရေပေါါ ပေါါနေမယ့်အပိုင်း free board နဲ့ ရေထဲနစ်နေမယ့်အပိုင်း ရေစူး draft တို့ပါဝင်ပါတယ်။
"weight measurements" မှာ၊ displacement, lightship သို့မဟုတ် light weight နဲ့ DWT ဆိုတဲ့ dead weight tonnage တို့ပါဝင်ပါတယ်။ 'displacement' ဆိုတာကတော့ ရေထဲမှာ ကျောက်ချရပ်နားထားတဲ့ သဘေ်ာရဲ့အလေးချိန်ဖြစ်ပြီး၊ 'long tons' သို့မဟုတ် 'metric tons' မက်ထရစ်တန်ယူနစ်ဖြင့် တွက်ချက်ဖော်ပြပါတယ်။ သဘေ်ာ hull ရဲ့ water line အောက်မှာရှိတဲ့ ထုထည်ကို သဘေ်ာရဲ့ အလျှား length, ရေထဲမှာ ရှိနေမယ့် ရေစူး draft နဲ့ သဘေ်ာရဲ့ ဗျက် breadth တို့ကိုမြှောက်ခြင်းဖြင့်၊ ရရှိလာတဲ့ တန်ဘိုးကို ရေငံ Salt Water ရဲ့သိပ်သည်းဆ (၁. ၀၂၅) ဖြင့်မြှောက်ကာ၊ displacement ကို မက်ထရစ်တန်ယူနစ် အနေနဲ့ တွက်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ရေ ရဲ့ သိပ်သည်းဆ specific gravity ဟာ ရေချို fresh water, ရေငံ salt water အစရှိတဲ့ ရေ အမျိုးအစား အပေါါမူတည်ပြီး ကွဲပြားသလို၊ နေရာဒေသ အပေါါမူတည်လို့ ကွဲပြားပါသေးတယ်။ ဥပမာအပူပိုင်းဒေသ tropical zone မှ ရေငံဟာ အအေးပိုင်းဒေသမှ ရေငံနဲ့ သိပ်သည်းဆခြင်း နှိုင်းယှဉ် ကြည့်လျှင်၊ ပိုမိုနည်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
displacement ကို 'long tons' ယူနစ်အနေနဲ့ တွက်ယူတဲ့အခါ၊ သဘေ်ာ hull ရဲ့ water line အောက်မှာ ရှိတဲ့ ထုထည်ကို သဘေ်ာရဲ့ အလျှား length, ရေထဲမှာ ရှိနေမယ့် ရေစူး draft နဲ့ သဘေ်ာရဲ့ ဗျက် breadth တို့ကိုမြှောက်ခြင်းဖြင့်၊ ရရှိလာတဲ့ တန်ဘိုးကို 'ပေ - feet' ဖွဲ့ပြီး၊ သဘေ်ာအမျိုးအစားနဲ့ တည်ဆောက်ပုံအရ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ 'Block Coefficient of the Hull' ဆိုတဲ့ ကိန်းသေတန်ဘိုးတခုဖြင့် ထပ်မံမြှောက်ယူပါတယ်။ water line အောက်မှာရှိတဲ့ ထုထည်စုစုပေါင်း volume ကို ကုဗပေ ယူနစ်ဖြင့်ရရှိလာတဲ့အခါ၊ (၁) ကုဗပေမှာရှိတဲ့ ရေငံ Salt water ရဲ့သိပ်သည်းဆ (၆၄) ဖြင့်မြှောက်ကာ၊ 'ပေါင် - pound' ဖွဲ့ပြီး၊ (၃၅) ဖြင့် စားခြင်းဖြင့် long tons ယူနစ်ကို၊ ရရှိပါတယ်။
'lightship' သို.မဟုတ် 'lightweight' ဆိုတာကတော့၊ လောင်စာဆီ fuel, ကုန် cargo, ခရီးသည် passengers နဲ့ သုံးရေ domestic used fresh water အစရှိတဲ့အလေးချိန်တွေမပါဝင်တဲ့၊ သဘေ်ာရဲ့ အမှန်တကယ် အလေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ DWT ဆိုတဲ့ 'dead weight tonnage' ကိုတော့ displacement မှ lightship သို့မဟုတ် lightweight ကို နှုတ်ယူခြင်းဖြင့်၊ တွက်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 04:43
Hydraulic control valves (၂)
Hydraulic control valves (၁)
Crankcase Explosion & Oil Mist Detector - (၂)
Crankcase Explosion & Oil Mist Detector - (၁)
Critical area in double hull tanker - (၁)
Shipboard electrical distribution system
Tanker Structure - Cargo Tank Primary Structure A...